ဗေဒင် – We Love Cele
ရာသီဖွား အလိုက် (၂၀၁၈) အတွက် အချစ်ရေးဗေဒင် ဟောစာတမ်း
Posted: March 16, 2018 Under: အချစ် By We Love Cele No Comments
စ်သူမရှိသေးတဲ့ Single လေးတွေအတွက် ၂၀၁၈ တစ်နှစ်လုံးစာ အချစ်ဗေဒင် ဟောစာတမ်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ ၁။ Aries – မိဿရာသီဖွား (မတ်လ ၂၁ ရက် – ဧပြီလ ၁၉ ရက်) ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကတော့ မိဿရာသီဖွားတွေအတွက် အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းတဲ့နှစ်ပါပဲ။ အခုလာမယ့်နှစ်မှာ တစ်ဘဝလုံး အတူလက်တွဲသွားမယ့်ချစ်သူနဲ့ ရေစက်ဆုံရပါလိမ့်မယ်။ ဖူးစာရှင်လို့ ဆိုရမယ့်ချစ်သူမျိုးနဲ့ ဆုံရမှာပါ။ အဲဒီလူက ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ဆုံရတဲ့သူဖြစ်နိုင်သလို သိကျွမ်းပြီးသားလူလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ၂။ Taurus – ပြိဿရာသီဖွား ( ဧပြီလ ၂၀ ရက် – မေလ ၂၁ ရက် ) ပြိဿရာသီဖွားတွေကတော့ … Continue reading "ရာသီဖွား အလိုက် (၂၀၁၈) အတွက် အချစ်ရေးဗေဒင် ဟောစာတမ်း"
Posted: March 15, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
၁၄.၃.၂၀၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၀.၃. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ အထိ ဆရာစံဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်စာ ဟောကိန်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ယတြာချေနည်းလေးတွေနဲ့ ကံကောင်းစေမဲ့ အရောင်တွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် အားလုံးပဲ ကံကောင်းကြပါစေနော် …. တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူများ တနင်္ဂနွေနေ့ မွေးသူတွေ ရပ်တန့်ထားတဲ့ အလုပ်တွေ စတင် အောင်မြင်မယ်။ ခရီးကိစ္စ အဆင်ပြေမယ်။ လူမျိုးကွဲ အကျိုးပေးမယ်။ အရပ်ဝေးနဲ့ ဆက်သွယ် လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေ အောင်မြင်မယ်။ ကံကောင်းမှုတွေ ကြုံမယ်။ ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ ရန်အတိုက်အခံ အနည်းငယ် ရှိတယ်။ ပြောသမျှ၊ လုပ်သမျှ အောင်မြင်မယ်။ တနင်္ဂနွေ၊ သောကြာ၊ စနေ နေ့ မွေးသူများ ကောင်းကျိုးပေးပြီး တနင်္လာနေ့၊ ကြာသာပတေးနေ့ မွေးသူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်။ ကံကောင်းစေမယ့် ဂဏန်း … Continue reading "ဆရာစံ-ဇာဏီဘို၏ တစ်ပတ်စာဟောစာတမ်း"
မွေးလ အလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်နေ သဘောထားများ
Posted: March 12, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
January – အေးအေးလေး နေတတ်သူ ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းနိုင်သူ အချစ်ကြီးတယ် သံယောဇဉ်တွယ်တာ မြန်တယ် မေ့နိုင်တဲ့စိတ် မွေးဖွားတတ်တယ် February – အာရုံနောက်တာ မကြိုက်ဘူး စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာကို ဖွင့်ဟ ပြောဆိုတတ်တယ် အမုန်းမပွားဘူး တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်တတ်သူ March – ဒေါသထွက်လာရင် ဘာမှ မကြည့်တော့ဘူး အရွဲ့ အရမ်းတိုက်တယ် အားနာတတ်တယ် ကူညီချင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ် သနားတဲ့ စိတ်ကြောင့် ခံစားနေရတတ်တယ် အရမ်း ချစ်တတ်ကြတယ် April – တစ်ယောက်ထဲ ရှိနေချိန် အတွေးများစွာနဲ့စဉ်စားနေတတ်ကြတယ် ဦးဆောင်သူအဖြစ်ရပ်တည်ချင်စိတ်ရှိသည် ဒေါသ ကြီးတယ် ဘာပဲ လုပ်လုပ် တိတိကျကျ လုပ်ရမှ ကျေနပ်တယ် … Continue reading "မွေးလ အလိုက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ စိတ်နေ သဘောထားများ"
Posted: March 06, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
လိုတရပရိတ်သတ်ကြီးရှင့်၊ ဆရာမဒေါက်တာ စောယုနွယ်ဟောပြောပေးထားတဲ့ ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာ ဗေဒင်ကို မတ်လ ၅ ရက်နေ့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မည်သည့်လ၊ မည်သည့်ရက်မှာ မွေးဖွားသူများဖြစ်စေ မိမိမွေးရက်ဖြင့် တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁ ၊ ၁၀ ၊ ၁၉ ၊ ၂၈ ) ရက်မွေးဖွားသူများ ပျိုရွယ်သူများ ချစ်သူမရှိသေးပါက ချစ်သူရတတ်ပြီး အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း အိမ်ထောင်ရေး သာယနေမယ့် နေ့ရက်ပါပဲ။ မသွားချင်တဲ့ ခရီးသွားရကိန်းရှိပြီး ပညာရေးကံကောင်းနေတာကြောင့် ဒီအချိန်မှာ မိမိတက်လိုတဲ့ သင်တန်းကို ရွေးချယ်တက်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအနေနဲ့ ခေါင်းကိုက်၊ ဇက်ကြောတက်ရောဂါများဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကံကောင်းသောအရောင် – အဖြူရောင် ကံကောင်းသောနံပါတ် – ( ၃၊ ၅ ၊ ၇ ) ယတြာ – မိမိနေအိမ်ဘုရားတွင် … Continue reading "ပျိုရွယ်သူတို့အတွက် ချစ်ရေးချစ်ရာ ဘ၀တွက်တာဗေဒင်"
“သင့်လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်က ပြောပြနေတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်”
Posted: February 17, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
သင့် လက်ဖဝါးလေး နှစ်ခု ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ အရေး အကြောင်းလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ဖူးစာဖက် ကို ခန့်မှန်းကြည့်လို့ ရတဲ့ အကြောင်းလေး တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ပုံသဏ္ဍန်လေးတွေ ကွဲပြားသွားတာနဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝိသေသလေးပါ ကွဲပြားသွားတာကြောင့် စိတ်ဝင်တစားနဲ့ သေချာလေး တိုက်ကြည့်ကြပါနော်။ ** ပုံ (၁) The Same Height လက်ဖဝါးနှစ်ဖက် ပူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရွယ်တူပြီး အဝိုက်ပုံသဏ္ဍန်လေး ဖြစ်နေတဲ့ လက်ပိုင်ရှင်တွေဟာ ဥာဏ်ရည်ထူးချွန် သူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘာပဲလုပ်လုပ် စနစ်တကျ လုပ်တတ်ပြီး ဘဝ တစ်လျှောက်လုံးကို plan တွေချပြီး ဖြတ်သန်းတတ်ကြတယ်။ တစ်ခု သတိထား သင့်တာက ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရမ်းကြီး ပိတ်လှောင်မထားဖို့ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အတွက် … Continue reading "“သင့်လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်က ပြောပြနေတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်”"
ခုနှစ်​ရက် ​သားသမီးများအတွက်​ တစ်​ပတ်​စာ​ဟောစာတမ်း (22.1.2018 မှ 28.1.2018)
Posted: January 23, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
တနင်္ဂ​နွေ သားသမီး ဤအချိန်​တွင်​ပြည်​တွင်းပြည်​ပကိစ္စ​ရေးရာအဖြာဖြာ​ဆောင်​ရွက်​ရရန်​အခွင့်​အခါ​ကောင်း ကျ​ရောက်​​သောအချိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။စိတ်​ကူးသစ်​နှင့်​လုပ်​ငန်းသစ်​များ​ဆောင်​ရွက်​ခြင်​ဖြင့်​ အထူးခြား​သောအကျိုးဆက်​များဖြစ်​ထွန်းလာမည်​။ဖန်​စီလုပ်​ငန်း၊ဖက်​ရှင်​လုပ်​ငန်း၊​ကျောက်​မျက်​ ရတနာ​ရောင်းဝယ်​ခြင်း ​လုပ်​ငန်းများ​ကောင်း၏။အထူးသဖြင့်​ တစ်ပါးသူ၏ကြားခံ ဝင်​​ရောက်​ ​ပြောဆိုမှုများနှင့်​မိသားစုတွင်​​ခေါင်း​ဆောင်​လုပ်​ခြင်းများသတိထားရမည့်​အချိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ အိမ်​​မြေယာများဝင်​ကိန်းရှိသည်​။လူမျိုးကွဲများနှင့်​ဆက်​ဆံလုပ်​ကိုင်​​သောအလုပ်​များ​ကောင်​မည်​။​မေတ္တာ​ရေးတွင်​အ​သေးစားပြဿနာများကိုအကျယ်​ချဲ့၍ပဠိပက္ခဖြစ်​ကာလမ်းခွဲရခြင်းများကြုံရမည်​။အိမ်​​ထောင်​​ရေးစိတ်​သ​ဘောထားကြီးကြီးထားသင့်​သည်​။ မသွားလို​သောခရီးများသွားရတတ်​သည်​။ပညာ​ရေး အထူး​ကောင်းသည်​။ကျန်းမာ​ရေးအဖျားအနာမဖားမည်​။နှလုံး၊ဆီံး၊အဂါင်္ဇာတ်​အစရှိ​သော​ရောဂါများခံစားရတတ်​သည်​။ အထူးယတြာ။ ဘုရားမှာ​မေမြို့ပန်း၊​အောင်​သ​ပြေပန်း၊ကံ​ကော်​ပန်းများလှူ​ပေးပါ တနလာင်္သားသမီး ဤအချိန်​တွင်​ လုပ်​ငန်း​ပြောင်းလိုစိတ်​ ​နေရာ​ပြောင်းလိုစိတ်​များဖြစ်​​နေတတ်​သည်​။​ပြောင်​​ရွှေ့လုပ်​ကိုင်​လျှင်​​ကောင်​သည်​။ခရီးသွားလာရမည်​။ကုန်​​ရောင်းကုန်​ဝယ်​လုပ်​ငန်​များ ၊ခရီးသွားလာ​ရေးလုပ်​ငန်းများ​ကောင်​သည်​။အချစ​ရေးတွင်​ကြားလူဝင်​ပြီးအ​နှောင်​အယှက်​​ပေးတတ်​သည်​သတိထားပါ။ အိမ်​​ထောင်​​ရေးက​တော့အဆင်​​ပြေစရာများဖြစ်​လာမည်​။ရပ်​​ဝေး​ရောက်​သားသမီးများမှသတင်း​ကောင်းကြားရမည်​။ပညာ​ရေးနှင့်​လူမူ​ရေးရှုပ်​​ထွေးမှု​ကြောင်းပညာ​ရေး​နှောင့်​​နှေးတတ်​သည်​။ကျန်းမာ​ရေး​ရောဂါဘယအမျိးမျိးနှိတ်​စက်​ခြင်းခံရမည်​။အထူးသဖြင့်​အတွင်းကျိတ်​နာဖြစ်​တတ်​သည်​။ခွဲစိတ်​ကုသမှုမထားခံယူခြင်း​ပေါ်​ပေါက်​လာတတ်​သည်​။ အထူးယတြာ။ ​ကော်​ဖီမစ်​ထုပ်​​ခေါက်​ဆွဲထုပ်​များလှူ​ပေးပါ။ အဂါင်္ သားသမီး စိတ်​ကူးထားလုပ်​ငန်းများဦးစား​ပေးလုပ်​ကိုင်​ရမည့်​အချိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။​အောင်​မြင်​မှုရရှိမည်​။စီးပွား​ရေးတိားချဲ့လုပ်​ကိုင်​ရမည်​။မိမိဩဇာတန်​ခိုးအာဏာများထက်​မြက်​​ပေါ်လွင်​မှုရှိလာမည်​။ ဝန်​ထမ်းလုပ်​ကိုင်​သူများ ရာထူးတိုးမည်​။ပညား​ရေးနှင့်​ပတ်​သက်​ပြီး နိုင်​ငံခြားခရီးသွားရတတ်​သည်​။​ငွေ​ကြေးကိစ္စများနှင်​ပတ်​သက်​ပြီး အမှုအခင်းများကြုံရတတ်​သည်​။အချစ်​​ရေးကံ​ကောင်းပြီးအဆင်​​ပြေ​နေမည်​။အိမ်​​ထောင်​​ရေး တစ်​ပါးသူ အတွက်​မိမိဂုဏ်​သိက္ခာကျဆင်းတတ်​သည်​။အနုပညာနှင့်​ဖန်းတီမှုများကိုထိ​ရောက်​စွာ​ဝေဖန်​ခံရမည်​။ကျန်းမာ​ရေး ဦး​ခေါင်း နှင်​ပတ်​သက်​ပြီး အရိုးအဆစ်​​ရောဂါများ​လေ​ရောဂါများဖြစ်​တတ်​သည်​။ အထူးယတြာ။ ဘုရားမှာ ​သောက်​​တော်​​ရေ၅ခွက်​ ၊ယို၅မျိုးလှူ​ပေးပါ။ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီး ဤအချိန်​တွင်​ စိတ်​ကူးအိမ်​မက်​​တွေနှင်​ဖြစ်​ပြက်​​နေတာများလွဲ​နေတတ်​သည်​။စိတ်​ကူးထားတာတစ်​ခုကြုံ​တွေ့​နေတာကတစ်​ခုဖြစ်​​နေမည်​။အ​ပေါင်းအသင်းကြောင့်​ မိမိဂုဏ်​သိက္ခာများကျဆင်​တတ်​သည်​။သတိထားရမည့်​အချိန်​ဖြစ်​ပါတယ်​။ လုပ်​ငန်းသစ်​များမှ အ​တွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ များရရှိမည်​။မိမိပိုင်​ဆိုင်​​သောပစ္စည်းများငှါးရမ်းခြင်းကိစ္စများသတိထား​ဆောင်​ရွက်​ပါ။အချစ်​​ရေး ကံ​ကောင်​သည်​။ စိတ်​​ပျော်​ရွှင်​မှုရမည်​။အိမ်​​ထောင်​​ရေးသာယာမည်​။ ကျန်းမာ​ရေး နှလုံး​ရောဂါ၊ထုံနာကျဉ်​နာ​ရောဂါများဖြစ်​တတ်​သည်​။ အထူးယတြာ။ ဘုရာမှာ နှင်းဆီ၊သ​ပြေညွှန့်​ … Continue reading "ခုနှစ်​ရက် ​သားသမီးများအတွက်​ တစ်​ပတ်​စာ​ဟောစာတမ်း (22.1.2018 မှ 28.1.2018)"
သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူအကြောင်း
Posted: January 21, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
သင်ဟာ…1ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်.. သင့် ချစ်သူ ဟာ တတ်တတ်ကြွကြွရှိမယ် ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အလွန်ကောင်းပြီး လူတဖက်သားကို ကူညီတတ်မဲ့သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို လိုချင်တာဖြည့်စည်းပေးမယ့် သူဌေးကြီးတျောက်လိုပါပဲ… 2ရက်နေ့ မွေးသူ ဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ ကြင်နာယုယတတ်တယ်။ သင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်တတ်ပြီး အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင် ပါရမီပါသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆိုမမေ့နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒွေ ဖန်တီးပေးမယ့်သူတျောက်ပါပဲ။ 3ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်တတ်တယ်။ ဆရာကြီး လုပ်ရမှာကျေနပ်ပြီးအမှားလုပ်မိရင်လည်း တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးသူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်အတွက်ဆို အခက်အခဲတွေကို တူတူဖြတ်ကျော်မယ့် လက်တွဲဖော်ကောင်း တျောက်ပါပဲ.။ 4ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ ဟာ စိတ်နေသဘောထားကြီ်းတယ်။ လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရမှကျေနပ်သူတျောက်ဖြစ်တ်တယ်။ သင့်အပေါ် နည်းနည်းလေး အနိုင်ယူရမှ ကျေနပ်နေသူတျောက်ဖြစ်တယ်။ 5ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့်ချစ်သူဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး လူချစ်လူခင်များတတ်သူတျောက်ဖြစ်တယ်။သင့်ကို အမြဲအားပေး ကူညီချင်တဲ့ သူ တျောက်လည်းဖြစ်တယ်။ 6ရက်နေ့မွေးသူဖြစ်ရင်… သင့် ချစ်သူ … Continue reading "သင့်မွေးရက် ကပြောတဲ့ သင့်ဖူးစာရှင်/သင့်ချစ်သူအကြောင်း"
ခြေထောက်က ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အကြောင်း
မင်္ဂလာပါနော်။ မိမိရဲ့ ခြေထောက်ကို ကြည့်လိုက်ရင်ပဲ ကိုယ်ဘယ်လို စိတ်နေစိတ်ထား ရှိသလဲဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။ ကိုယ့်မှာရော ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားရှိသလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်။ ၁။ တပြေးညီ ခြေချောင်းလေးတွေ တပြေးညီဖြစ်နေရင် သင်ဟာ အလွန်သတိထားတတ်တဲ့သူပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု မချခင်မှာ အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားတတ်ပါတယ်။ ၂။ ဂရိ ခြေထောက် အဲဒီခြေထောက်လေးတွေက ခြေညိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ ခြေထောက်တွေပါ။ သင်က တက်ကြွတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်။ သင့်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ၃။ ရောမ ခြေထောက် သင်က အရမ်း ဆိုရှယ်ကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်းကြင်နာတတ်တယ်။ ဘဝကို ဟန်ချက်ညီညီနေတတ်တယ်။ တခြားသူပြောတာကို နားထောင်ပေးတတ်တယ်။ ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိပြီး အလွယ်တကူ ခင်မင်တတ်သူပါ။ ၄။ ဘေးစောင်းခြေထောက် ခြေမကမြင့်ပြီး ကျန်တဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေက သူ့အတိုင်း … Continue reading "ခြေထောက်က ပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့ အကြောင်း"
သင်ကိုယ်တိုင် လွယ်လွယ်တွက်ကြည့်လို့ရတဲ့ သင့် မွေးသက္ကရာဇ် နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်များ
ကိုယ်မွေးတဲ့ ရက်၊လ၊နှစ်တွေက ကိုယ့်အရည်အသွေးနဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောပြနေပါတယ်။ မွေးသက္က၇ာဇ်က ပြောတဲ့အသံတွေကို တစ်ခါလောက် နားစွင့်ကြည့်ရအောင်။ တွက်နည်းက လွယ်ပါတယ်။ မွေးနေ့၊ မွေးလ၊ မွေးနှစ်ကို ဂဏန်းတစ်ခုတည်းရအောင် ပေါင်းရမှာပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြပါမယ်။ မတ် ၂၀ ၁၉၅၀ ၃+၂၀+၁၉၅၀ = ၁၉၇၃ ၁+၉+၇+၃ = ၂၀ ၂+၀= ၂ သည်တော့ ၂ ကို သွားကြည့်ရမှာပါ။ အခု ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းချက်တွေကို ကြည့်ရအောင်။ ၁ ဂဏန်းသမား မူလရင်းမြစ် ၂ ဂဏန်းသမား ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင် ၃ ဂဏန်းသမား ပျော်ရွှင်မြူးထူးတဲ့သူ ၄ ဂဏန်းသမား ရှေးရိုးစဉ်လာသမား ၅ ဂဏန်းသမား ရွေ့လျားနေတတ်သူ ၆ ဂဏန်းသမား ရိုမန်တစ်ဖြစ်တဲ့သူ ၇ … Continue reading "သင်ကိုယ်တိုင် လွယ်လွယ်တွက်ကြည့်လို့ရတဲ့ သင့် မွေးသက္ကရာဇ် နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်များ"
မှဲ့ ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး
Posted: January 12, 2018 Under: ဗေဒင် By We Love Cele No Comments
ပါးပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် ရည်းစားရဖို့ ဘယ်တော့မှအောက်ကျမခံဘူး။ သေလောက်အောင်ချောနေ လန်ထွက်နေပါစေ သဲသဲလှုပ် ချစ်မပြတတ်ဘူး .. ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူထက် ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူနဲ့ပဲ ဖူးစာပါရော။ နဖူး..ပေါ်က မှဲ့ပိုင်ရှင် သနားတတ်တဲ့စိတ် အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် ချစ်သူတစ် ယောက်ရတတ်တယ်။ အဲ့ချစ်သူက အနိုင်ယူတာ ခဏခဏငိုအောင် စိတ်ညစ်အောင် လုပ်တာကြုံရတတ်တယ်။ဒါပေမယ့်… အဲ့ချစ်သူကပဲ သင့်ကို သစ္စာရှိရှိ ချစ်မယ့်သူ ဆိုတာမမေ့နဲ့။ မျက်ခုံး..တစ်ဝိုက်က မှဲ့ပိုင်ရှင် အချစ်စစ်ရဖို့ အချိန်တွေမနည်းရင်းရတတ်တယ်။ စန်းပွင့်ပြီး လူချစ်လူခင် ပေါတယ်။ အသေရရ အရှင်ရရ ချစ်ပြမယ့်သူ တွေရှိလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အားကျရတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း အချစ်နဲ့ပက်သက်ရင် ကံနိမ့်တတ်တာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ သိတယ်။ မျက်လုံးအိမ်..ထဲက မှဲ့ပိုင်ရှင် မာနကြီးတယ်။ ရည်းစားတစ်ယောက်ကို လွယ်လွယ်မထားတတ်ကျဘူး။ ချစ်ပြီဆို … Continue reading "မှဲ့ ကပြောပြတဲ့ သင့်ရဲ့အချစ်ရေး"